လူမှု့ကွန်ယက်မှာ အရမ်းရေပန်းစားနေတဲ့ မင်သားရဲ့ပုံကို shotcut လေးတွေလုပ်ထားတဲ့ ဟန်သီ – Cele Oscar
ပိုင်တံခွန် ကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်အများဆုံး နာမည် ကြီး မော်ဒယ်၊ မင်းသား တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်နေ သူပါ။ချောမော တဲ့ ရုပ်ရည် နဲ့ အပြော ချိုချိုလေး တွေကြောင့်လည်း မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့အသည်းစွဲ မင်းသားလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်လေးက အခုဆိုရင် အာရှနိုင်ငံ အချို့က မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ပါ အရမ်း ကို ရေပန်းစားနေပါပြီ။
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေ ထက်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီး နေသလို စင်္ကာ ပူက သတင်းစာမှာတောင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ ပိုင်တံခွန် အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံက ပရိသတ်တွေ အားလုံးနဲ့ အနုပညာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံးက ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်နေကြတာပါ ။ ပရိသတ် အချစ်တော် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးလေး ဟန်တီ ကလည်း အများချစ်ခင် အားပေးနေကြတဲ့ မင်းသား နဲ့ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့်က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တွေ့လို့အမှတ်တရ ဆိုတဲ့စာသားလေး နဲ့ အတူ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ပုံတွေ ဖြစ်လို့ ဝါးတားတား လေးဆိုတော့ ဘယ်သူတွေလဲ သိလား? လို့ မေးခွန်းထုတ် ထားပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ကတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ ပိုင်တံခွန် ဆိုတာကို တန်းသိကြမှာပါနော် ။ ပြက္ခဒိန် ကနေ ပြန်ရိုက် ထားတဲ့ ပုံလေးတွေမို့ ဝါးတားတားဖြစ်နေပေမယ့် လည်း ပရိသတ်တွေက ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်လေး တွေကို အားပေးဝန်းရံ နေကြတာတွေ့ရပါတယ် ။
Source : Han Thi
ပိုငျတံခှနျ ကတော့ မိနျးကလေး ပရိသတျအမြားဆုံး နာမညျ ကွီး မျောဒယျ၊ မငျးသား တဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျနေ သူပါ။ခြောမော တဲ့ ရုပျရညျ နဲ့ အပွော ခြိုခြိုလေး တှကွေောငျ့လညျး မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ ရဲ့အသညျးစှဲ မငျးသားလေး ဖွဈခဲ့ပွီး မွနျမာ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျောလေးက အခုဆိုရငျ အာရှနိုငျငံ အခြို့က မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ ကွားမှာ ပါ အရမျး ကို ရပေနျးစားနပေါပွီ။
လတျတလော လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှေ ထကျမှာ အရမျးကို နာမညျကွီး နသေလို စင်ျကာ ပူက သတငျးစာမှာတောငျ ထညျ့သှငျး ဖျောပွခွငျးခံရတဲ့ ပိုငျတံခှနျ အတှကျ မွနျမာ နိုငျငံက ပရိသတျတှေ အားလုံးနဲ့ အနုပညာ ညီအဈကို မောငျနှမတှေ အားလုံးက ဂုဏျယူ ဝမျးမွောကျနကွေတာပါ ။ ပရိသတျ အခဈြတျော မျောဒယျလျမငျးသမီးလေး ဟနျတီ ကလညျး အမြားခဈြခငျ အားပေးနကွေတဲ့ မငျးသား နဲ့ လှနျခဲ့သော ငါးနှဈခနျ့က ရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးတှေ တှလေို့အမှတျတရ ဆိုတဲ့စာသားလေး နဲ့ အတူ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
လှနျခဲ့တဲ့ ငါးနှဈက ပုံတှေ ဖွဈလို့ ဝါးတားတား လေးဆိုတော့ ဘယျသူတှလေဲ သိလား? လို့ မေးခှနျးထုတျ ထားပမေယျ့ ပရိသတျတှေ ကတော့ မွငျလိုကျတာနဲ့ ပိုငျတံခှနျ ဆိုတာကို တနျးသိကွမှာပါနျော ။ ပွက်ခဒိနျ ကနေ ပွနျရိုကျ ထားတဲ့ ပုံလေးတှမေို့ ဝါးတားတားဖွဈနပေမေယျ့ လညျး ပရိသတျတှကေ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ စုံတှဲပုံရိပျလေး တှကေို အားပေးဝနျးရံ နကွေတာတှရေ့ပါတယျ ။
အထာကျကျ ပို့စ်တွေပေးရင်း မိန်းမလှလေး တွေကိုရင်ခုန်စေပြန် တဲ့ ပိုင်တံခွန်